Compton, သင်ကြိုးစားရမယ့်ပေါ့ပါးတဲ့တေးရေးဆရာ | Linux မှ
AurosZx | | အသွင်အပြင် / ကိုယ်ပိုင်, GNU / Linux များ, သင်ခန်းစာများ / လက်စွဲ / သိကောင်းစရာများ
ငါနှင့်စကားပြောသောသူတို့သည် IRCသူတို့ဟာငါဝါသနာပါတယ်ဆိုတာသူတို့သိတယ် ပေါ့ပါးစားပွဲခုံများ။ ငါပိုက်ဆံဖြုန်းတယ် Xfce, LXDE, Openbox ပင် အိမ်ထောင်ဖက်ကဲ့သို့အခြားပတ်ဝန်းကျင်မှာကတည်းက Gnome / သစ်ကြံပိုးခေါက် y KDE သူတို့အရမ်းပဲ မိုးသည်းထန်စွာ ငါ့အကျိုးနွံ PC အတွက်။
အလားတူပဲငါကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖျော်ဖြေ စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်း ထိုကဲ့သို့သောစားပွဲခုံနှင့်သူတို့ကိုစုဝေး အလင်း application များ ငါ့ကိုနိမ့်စားသုံးမှုနှင့်အတူတတ်နိုင်သမျှပြည့်စုံတတ်နိုင်သမျှစနစ်တစ်ခုရှိသည်ဖို့ခွင့်ပြုပါ။
ငါတို့သူငယ်ချင်း TheSandman86 ကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြပါ ပုသိမ် 11အမည်ရှိတေးရေးဆရာပါဝင်သည်သော Compton, ငါစမ်းသပ်ပြီးခဲ့ကြရသောငါယနေ့အကြောင်းပိုမိုပြောလိမ့်မယ်။
အတူစတင်, Compton အလင်းတေးရေးဆရာဖြစ်ပါတယ်ရှေ့မှာဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း) တွင်ပါဝင်သည် ပုသိမ်။ ဒီတေးရေးဆရာတစ် ဦး ဖြစ်ပါတယ် အမဲချိတ် de xcompmgr- ဒါန, အလှည့်အတွက်တစ်ခက်ရင်းခွသည် xcompmgr။ ၎င်းကိုသင်အလင်းရောင်ဘယ်လောက်ရကြောင်းစိတ်ကူးထားပြီးဖြစ်သည်။ သို့သော်ငါပြောလိမ့်မည် - ၎င်းသည် activate လုပ်ခဲ့သည့် option အားလုံးနီးပါးနှင့်၎င်း၏သုံးစွဲမှုသည် 2MB ဖြစ်သည်။ ကောင်းတယ်မထင်ဘူးလား 🙂
ဒါကိုသက်သေပြဖို့လိုတယ် Download ပြုလုပ် သင့်စာမျက်နှာမှ git y အဲဒါကိုစုစည်းပါ။ သူတို့ရဲ့ မှီခို စုစည်းရန်လိုအပ်သကဲ့သို့တူညီကြသည် xcompmgr။ သူတို့ကိုငါဒီမှာထား:
xprop, xwininfo / x11-utils ။
Debian နှင့် Derivatives အတွက်မှတ်စု: libs သို့ပေါင်းထည့်ပါ«-ဒေတာ" အဆုံးမှာ။ ဥပမာ: libx11-dev.
ငါတို့ install လုပ်တယ် git ပြု (terminal တွင်)
၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ terminal ထဲတွင်ရှိသည့် folder သို့ compton ကုဒ်ကို download လုပ်လိမ့်မည်။ ထိုအခါငါတို့ execute:
အဲ့ဒါနဲ့ငါတို့ရှိမယ် Compton ထည့်သွင်းထားသည် Compton terminal ကကွပ်ကဲသည်, ငါတို့သိနိုင်သည် ရရှိနိုင် options များ နှင့် လူကို compton ။ သို့သော်ယဉ်ကျေးသောအရာအနေဖြင့်ကျွန်တော်အချို့ကိုချန်ထားပါသည် ဥပမာ:
compton -c ဖွဲ့စည်းမှု၏အခြေခံအကျဆုံးပုံစံ။ ဖွဲ့စည်းမှု အရိပ်နှင့်အတူစံ ပြတင်းပေါက်များ၊ (ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသောတန်ဖိုးများ).
compton -cCGb : ဖွဲ့စည်းမှုနှင့်အတူ ပြတင်းပေါက်ပေါ်မှအရိပ်, သူတို့ကိုပေါ်ထွန်းထံမှသူတို့ကိုတားဆီး ပြားများနှင့်ဆိပ်ကမ်းများနှင့်ပြတင်းပေါက်များကိုဆွဲချချပါ။
compton -r 12.0 -o 0.75 -l -15.0 -t -15.0 -I 0.028 -O 0.03 -D3-c -f -C -F -G : ဒါကအလတ်စား xD ဒါငါသုံးတဲ့တစ်ခုပါ။ ရှိပါတယ် အရိပ် ပြားများနှင့်ဆိပ်ကမ်းများသို့လောင်ကျွမ်းခြင်းမရှိသော animations တွေကို «မှေးမှိန်က de » ပြတင်းပေါက်၌ရှိသကဲ့သို့, မီနူးများ.
ကောင်းပြီနောက်ဆုံး setup နဲ့အတူကျွန်တော့်စားပွဲခုံတွေကအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် -
ဖော်ပြခဲ့တဲ့စီစဉ်မှုနဲ့ငါ့ Debian Xfce
တူညီတဲ့ configuration နှင့်အတူငါ့ Arch LXDE ။
သင်မြင်သည့်အတိုင်းရလဒ်မှာအတော်လေးဖြစ်သည် ကျေနပ်ဖွယ်။ စားသုံးမှုလျှော့ချခြင်းနှင့်စားပွဲခုံများ၌ကောင်းမွန်သောသက်ရောက်မှုများ အချို့သော နှိုင်းယှဉ်ဆင်းရဲသောသူအဖြစ်အရည်အချင်းပြည့်မီလိမ့်မယ် Gnome o KDE.
1 Compton ကို desktops ၏ start သို့ထည့်ခြင်း
2 အပိုဆု - Gcompton, Compton အတွက်ဂရပ်ဖစ်မျက်နှာပြင်
Compton ကို desktops ၏ start သို့ထည့်ခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့ကဒီဖွဲ့စည်းမှုကိုကိုယ်တိုင်ဖွင့်ချင်တာသေချာပါတယ်😛ဒါကြောင့် Compton ကိုအချို့ Desktop များအလိုအလျောက်စတင်ခြင်းကိုဘယ်လိုရှင်းပြရမယ်။
Xfce ငါတို့သွားမယ် Configuration manager » Session and start » Application autostart » Add နှင့်ငါတို့ preference ကို၏ options များနှင့်အတူ command ကိုထည့်ပါ။
LXDE ကျနော်တို့ဖိုင်ကိုတည်းဖြတ် / etc / xdg / lxsession / LXDE / autostart ပြီးတော့ငါတို့ပေါင်းထည့်«@»နောက်ပြီး command နဲ့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ options တွေနောက်လိုက်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်၏ Arch LXDE မှတစ်ခုထဲတွင်ဤပါဝင်သည် -
[code] @lxpanel -profile LXDE
@pcmanfm -desktop –profile LXDE
@xscreensaver -no -splash
@ / usr / bin / numlockx အပေါ်
Openbox Openbox အတွက်ဖိုင်ကိုတည်းဖြတ်ရမယ် ~ / .config / openbox / autostart ပြီးရင် command & options ကိုထည့်ပြီး "&" (ဖြစ်နိုင်ရင်) ထပ်ထည့်ပါ။ ဥပမာ:
ဤဥပမာများသည်ဥပမာသင်သည်အခြားစားပွဲခုံများသို့မဟုတ် ၀ င်းဒိုးမန်နေဂျာများကိုစမ်းကြည့်နိုင်သည်။ သူတို့လိုလျှင် ဝေစု သင်၏ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံကိုရေးရန်တွန့်ဆုတ်မနေပါနှင့် ငါတို့၏ငါးပိနှင့်မှတ်ချက်ထဲမှာထားခဲ့ပါ😉
အပိုဆု - Gcompton, Compton အတွက်ဂရပ်ဖစ်မျက်နှာပြင်
ကောင်းပြီ၊ ငါတို့ချစ်ရတဲ့အဖော်ပဲ သူတို့ဟာ Link ပါတစ် ဦး အပေါ်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည် ဂရပ်ဖစ် interface ကို အတွက် Comptonကိုခေါ် Gcompton။ ဒါဟာ၌ရေးထားလျက်ရှိ၏ Python ကို y GTK။ ၎င်းမှကျွန်ုပ်တို့အားလုံးညှိနိုင်သည် parameters တွေကို de Compton အဖြစ် စတင်ပါ, ရပ်လိုက်ပါ y ပြန်ဖွင့်ပါ။ ပြီးတော့ကျနော်တို့ကခလုတ်ကိုနှိပ်ပါလျှင်init session ထဲသို့ထည့်ပါ«, ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အား desktop ၏အစသို့ထည့်ရန် command တစ်ခုပေးလိမ့်မည်။ Terminal အစား GUI ကိုနှစ်သက်သူများအတွက်အလွန်အသုံးဝင်ပါသည်။
Gcompton မှာရရှိနိုင်ပါတယ် Son Link ကို Githubမိမိအစီမံကိန်းများ၏အခြားနှင့်အတူ။ ၎င်းကိုထည့်သွင်းရန် terminal တွင်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်သည်။
git ကိုယ်ပွား git: //github.com/son-link/gcompton.git
ပြီးရင် folder ထဲကိုသွားပြီး file ကို execute လုပ်လိုက်တယ် gcompton.py။ သို့သော်၊ ၎င်းသည်၎င်းတို့ကိုမစတင်ပါက၊ ထိုဖိုင်ကိုတည်းဖြတ်ပြီးရှာဖွေပါ "Gcompton.glade"၎င်းကို၎င်းအားလမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံသို့ပြောင်းပါ။ ဥပမာ, « /Home/user/gcompton/gcompton.glade »အသုံးပြုသူသည်သင်၏အသုံးပြုသူဖြစ်သည်။သိသာထင်ရှားသည်…).
ဒီတော့ Compton ကော? အခြားမည်သည့် ၀ င်းဒိုးတေးရေးဆရာကိုသုံးပါသလဲ။ သို့မဟုတ်သူတို့ဖြစ်ကောင်းသူတို့တေးရေးဆရာကိုအသုံးပြုသည်မဟုတ်လော စကားပြောပါ၊ အားလုံးကိုနားထောင်ပါ ဦး
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » အသွင်အပြင် / ကိုယ်ပိုင် » Compton, သင်ကြိုးစားရမယ်ပေါ့ပါးတဲ့တေးရေးဆရာ
contribution xd ကိုမသိသောသူများအတွက်ကျွန်ုပ်သည်ကောင်းမွန်သောထည့်ဝင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည် ၂ ပတ်ကဲ့သို့၎င်းကိုခေတ္တသိမ်းထားခဲ့ပြီးအမှန်တရားသည် xcompmgr နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်မြန်သည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ အမှန်တရား - xcompmgr ကကျွန်တော့်ကိုမယုံခဲ့ဘူး (အရမ်းရိုးရှင်းပါတယ်) နဲ့ Cairo Composite …ကောင်းပြီ၊ တေးရေးဆရာအတွက် 50MB ပေးသလား။ OO သူ့မှာကွန်ပျူတာကောင်းကောင်းမရှိဘူး ... Compton ကကယ်တင်ခြင်းပဲ။ ငါလိုချင်တာပဲ😀
အဲဒါကြောင့်ငါ composer xd ကိုမသုံးတော့တာပါ၊ ငါတို့အားလုံးက composer ကိုရှာကြတာပါ။ * - *
သူတို့ဟာ Link ပါ ဟုသူကပြောသည်
Cairo-compmgr မှပြproblemနာသည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသိသည်၊ submenus ကိုညာဘက်ခလုပ်ဖြင့်ဖွင့်သောအခါဖြစ်သည်။ 50Mb Compiz သည်ဥပမာအားဖြင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းသည်ဘာမျှမဟုတ်ပါ (၎င်းသည် Beryl သာရှိစဉ်ကကျွန်ုပ်ကြိုက်ခဲ့သည်)
Son Link မှစာပြန်ပါ
တကယ်တော့ဟုတ်တယ်! လက်ျာကလစ်နှိပ်ပါနှင့်ပတ်သက်။ အလွန်စိတ်ပျက်စရာ🙁
အပြည့်အဝနှစ်ပတ်လည်၌အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဆောင်းပါးနှင့်အတူကကျင်းပ !!! ထောက်ခံချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ချက်ချင်းပဲကြိုးစားမယ်
ကောင်းပြီ၊ ကျွန်ုပ်သည်ယနေ့အချိန်ရှိပါကကျွန်ုပ်သည်အခြားတစ်ခုပြုလုပ်လိမ့်မည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်ဤရက်သတ္တပတ်အတွက်သင့်ကိုကြွေးတင်နေသည်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် AurosZx, ကြီးသောပစ္စည်းပစ္စယ။ ငါအဲဒါကို install လုပ်ပြီး Xfce Composer ထက်ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်မလားစမ်းကြည့်တော့မယ်။ ငါမမှားရင် xcompmgr ကိုသုံးတယ်။ 😀
ကိုယ့် Compton ကို install နှင့်သင်၏ setup ကိုပွေးလေ၏။ အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်အသွင်ကူးပြောင်းမှုများ၏ချောချောမွေ့မွေ့ကိုကျွန်ုပ်နှစ်သက်သည်
ဟုတ်ပါသည်၊ အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ light ၎င်းသည်အလင်းစားပွဲခုံများသို့«မှော်»ထိခြင်းကိုပေးသည်။
အလွန်ကောင်းသောအချက်အလက်, အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဆောင်းပါးအလွန်ပြည့်စုံ, ယခုဘယ်သူမှကြိုးစားရန်မဆင်ခြေရှိပါတယ်။
ဒီနေ့ငါအချိန်ရှိရင် Arch ကိုငါစမ်းကြည့်ပြီးဒီတေးရေးဆရာကို Openbox နဲ့စမ်းသပ်ကြည့်ပါလိမ့်မယ်။ သတင်းအချက်အလက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
IRC ၏စကားပြော။ ဒါဟာပိုပြီးသုံးစွဲနိုင်ဖြစ်သင့်သည်။ ငါရှာရန် "search" ဆိုသည့်နေရာကိုသွားရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။
ဟုတ်ပြီ၊ ငါတို့ကိုဒီအခင်းအကျင်းအသစ်မှာဖြေရှင်းမယ်။ ဒီတစ်ခုစီကို ၈၀% နီးပါးအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီဆိုရင်ဒီဟာကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်လို့ငါထင်တယ်။
ထိုခေါင်းစဉ်အသစ်ကိုကျွန်ုပ်တွေ့မြင်ပြီးပါပြီ theme မိုဘိုင်းအခင်းအကျင်းအတွက်ပြုပြင်မွမ်းမံမှု (သို့မဟုတ်ပျောက်ဆုံးနေသောပြင်ဆင်မှုများ) နှစ်ခုရှိပါသလား။ အဲဒါမလိုအပ်ပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်ကောင်းပါတယ်။ မင်းလိုချင်ရင်ကြိုးစားကြည့်ပါ ဦး ။
ကောင်းပြီ၊ ယခုငါတို့ PC ဆောင်ပုဒ်တတ်နိုင်သမျှပွတ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ သင်၏အကူအညီဖြင့်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောအမှားများကိုပြင်ဆင်ပြီးတိုးတက်မှုများကိုထည့်သွင်းလိမ့်မည်။ အရာအားလုံး ၁၀၀% ရောက်ပြီဆိုရင်မိုဘိုင်းဆောင်ပုဒ်ကိုပဲအာရုံစိုက်တယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအမျိုးအစားအမျိုးအစားမှာသူ့ရဲ့စရိုက်လက္ခဏာတွေရှိတယ်၊ အဲဒါကိုသီးခြားစီထားလိမ့်မယ်၊ ဆိုလိုတာက m.desdelinux.net something
ဒီနေ့ ၉ ကိုတကယ်ပြင်ဆင်ထားပြီလို့မျှော်လင့်ရအောင်၊
Xubuntu တွင်ထည့်သွင်းရန်သင်ပထမ ဦး ဆုံး xcompmgr ကို uninstall လုပ်ရန်လိုသလား။
လုံးဝမဟုတ်ပါ၊ Xfce တေးရေးဆရာကိုသင်ဖွင့်ထားလျှင် disable လုပ်ရန်လိုသည်။
ယခုငါ Debian Wheezy တွင် lxde နှင့် metacity အတူရှိနေပြီး metacity composite ကိုဘယ်လိုသက်ဝင်ရမလဲဆိုတာမသိခဲ့ပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်ဒီဖြေရှင်းချက်ကိုကျွန်တော်ကြိုက်ခဲ့သည်။
#! / usr / bin / env python2 ကို Python သို့ပြောင်းပါ
AurosZx ကိုမှတ်ချက်ပေးဖို့ကျွန်တော့်မှာဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Archlinux မှာ python3ကိုသုံးလိမ့်မယ်
ကောင်းတဲ့အရိပ်ပုံဆွဲခြင်း၊ အလွန်ဆိုးလွန်းလို့ကျွန်တော်မစုစည်းနိုင်ပါ။ = (
ပထမ ဦး ဆုံး install လုပ်ပါ
aptitude တည်ဆောက် - မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော gcc install လုပ်ပါ
ထိုအခါလုပ်ပါလုပ်ပါ ... ရုံဆောင်းပါးကပြောပါတယ်။ ဒီဟာမသွားရင်ပြန်လာကြည့်ပါ ဦး 🙂
စကားမစပ်၊ ငါ Debian အသုံးပြုသူပါ၊ ပေါ်တူဂီကရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ Mac သုံးစွဲသူမဟုတ်ပါ😀 (စပ်စုသည်)
ဖိုရမ်တွင်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုကိုဖွင့ ်၍ ၎င်းသည်အဘယ်ကြောင့်၎င်းကိုသင့်ကိုမရေးသည်ကိုရှင်းပြပြီးသင့်အား ^^ ကူညီရန်ကျွန်ုပ်တို့ကြိုးစားသည်
ဘာအမှားရလဲ ထိုအခါ ... site ကိုမှ welcome ကြိုဆိုပါတယ်
[sourcecode = bash]
Package x11 ကို pkg-config ရှာဖွေရေးလမ်းကြောင်းမှာရှာမတွေ့ပါ။
အဆိုပါ PKG_CONFIG_PATH ပတ်ဝန်းကျင် variable ကိုရန်
အထုပ် 'x11' မတွေ့ပါ
Package xcomposite ကို pkg-config ရှာဖွေရေးလမ်းကြောင်းမှာရှာမတွေ့ပါ။
`xcomposite.pc 'ပါ ၀ င်သောလမ်းညွှန်ကိုသင်ထည့်နိုင်သည်။
Package xfix များကို pkg-config ရှာဖွေရေးလမ်းကြောင်းမှာရှာမတွေ့ပါ။
xdamage အစီအစဉ်ကို pkg-config ရှာဖွေရေးလမ်းကြောင်းမှာရှာမတွေ့ပါ။
Package xrender ကို pkg-config ရှာဖွေရေးလမ်းကြောင်းတွင်ရှာမတွေ့ပါ။
ဖိုင်ထဲတွင် src / compton.c မှပါဝင်သည်: 11: 0:
src / compton.h: 17: 22: ဆိုးဝါးတဲ့အမှား - X11 / Xlib.h: ဖိုင် (သို့) လမ်းညွှန်မရှိဘူး
လုပ်: *** [compton.o] အမှား 1
ငါ compton ခံစားရပုံကိုကြိုက်တယ်, အတိဖြစ်ခြင်းကြောင့်အလင်းရဲ့ ~
စာကောင်း ငါမကြာသေးမီက elav နှင့်စကားပြောခဲ့ပြီးသူကကျွန်ုပ်အားဤတေးရေးဆရာကိုအကြံပေးခဲ့သည်။ သို့သော်၎င်းသည်လေ့လာရန်အခမဲ့အချိန်ရရန်မျှော်လင့်သော Debian အထုပ်ထဲတွင်မပါဝင်သောကြောင့်ဤပို့စ်သည်ကျွန်ုပ်အတွက်အလွန်ကောင်းသည်။ အလွန်အချိန်မီ။
မင်္ဂလာပါ။ နောက်ဆုံးသောနေ့ရက်များမှာ gnome3ကိုတစ်စုံတစ်ယောက် install လုပ်လိုက်ပြီလား။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီစနစ်ကငါ့ကိုလုံးဝမစတင်တာကြောင့် pointer ပါတဲ့အနက်ရောင်မျက်နှာပြင်တစ်ခုပဲကျန်တော့တာပေါ့။ startx နဲ့တောင်မစတင်ဘူး။
မင်္ဂလာပါသူငယ်ချင်း၊ ကျွန်ုပ်လုပ်သည့်အချိန်တွင်လျှောက်ထားပါ၊ ကျွန်ုပ်အားဤအမှားကိုပို့ပါ၊ ကျွန်ုပ်ကိုကူညီပါကကျွန်ုပ်အားကျေးဇူးတင်ပါလိမ့်မည်
root @ vero-pc: / home / vero / c / compton # လုပ်ပါ
လုပ်: cc: ဒီပရိုဂရမ်ကိုမတွေ့ပါ
လုပ်: *** [compton.o] အမှား 127
bull to reply
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်မှာ Lubuntu 12.04 ပါ။ ဒီတေးရေးဆရာကို install လုပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်၊ ဒါပေမဲ့အမှားကိုလုပ်တဲ့အဆင့်မှာရပါတယ်။
libconfig ပက်ကေ့ခ်ျကို pkg-config ရှာဖွေရေးလမ်းကြောင်းတွင်ရှာမတွေ့ပါ။
လုပ်: pcre-config ကို: အစီအစဉ်ကိုမတွေ့ပါ
src / compton.h: 51: 18: ဆိုးဝါးတဲ့အမှား - pcre.h - ဖိုင် (သို့) လမ်းညွှန်မရှိဘူး။
(မှတ်ချက်။ ။ xproto / x11proto နှင့် မှလွဲ၍ build-essential gcc၊ ပို့စ်တွင်ဖော်ပြထားသောမှီခိုမှုများပြီးသားဖြစ်သည်
xprop, xwininfo / x11-utils »သူတို့ကိုငါ repository မှာတွေ့လို့ပါ။ ငါ -dev မှာအဆုံးသတ်ခဲ့တဲ့ x11proto package တွေအားလုံးကိုတောင် install လုပ်ခဲ့တယ်။ )
ဤသို့ဖြင့် Lubuntu ကို Cairo Dock ကိုစနစ်တကျအလုပ်လုပ်စေနိုင်ခဲ့သည်။
PS: Compton ကို install လုပ်ခဲ့သောဖိုင်သည်ဤနေရာတွင်ရောက်သည်။
မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်ုပ် install လုပ်သည့် distros အားလုံးတွင် xcompmgr-compton ပါ ၀ င်သည်။ သို့သော်လက်ပ်တော့များတွင်၎င်းသည်စွမ်းအင်အလွန်အကျွံသုံးစွဲသည်၊ ၎င်းကိုသတ်ပြီးနောက်ဘက်ထရီသည်ကြာရှည်ခံသည်။
DevNull Malkavian ဟုသူကပြောသည်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Manjaro မှာ Openbox with ဖြင့် autostar ကိုဘယ်လိုထည့်ရမယ်ဆိုတာရှာဖွေခဲ့တယ်
ယခုသူက XD အလုပ်လုပ်တယ်ရှိမရှိကြည့်ရှုရန်
compton -cGG &
DevNull Malkavian အားပြန်ပြောပါ
Yoglis ဖာနန်ဒက် ဟုသူကပြောသည်
ကောင်းပြီ, ငါ linux မှအသစ်ကထွက်လှည့်, ငါ (LXDE နှင့်အတူ) Lubuntu ရှိသည်နှင့်ငါ compton ကို install ရှိသည်, ငါအထုပ်မန်နေဂျာကနေ install လုပ်ထားတယ်, တကယ်တော့သူကငါ့အဘို့အလုပ်ဖြစ်တယ်ဘယ်တော့မှဖြစ်ပါသည်, ငါသည်သင်တို့ကိုပေးသောကုဒ်များရေးလိုက်နှင့်ငါဘာမျှမပါဘူး အခြားကုဒ်တစ်ခုနှင့်အလိုအလျောက်စတင်ပါ။ ဘာမှမလုပ်ပါ။ ဥပမာ - ဒီကုမ်တန်ကွန်ရက်စာမျက်နှာမှကျွန်ုပ်ရရှိခဲ့သော -c -r 16 -l -24 -t -12 -G -b
ကျွန်ုပ်၌၎င်းသည်ပုံမှန်ဖွဲ့စည်းမှုမန်နေဂျာအဖြစ်ကျွန်ုပ်၌ xD ဘာလုပ်ရမည်ကိုရိုးရိုးသားသားမသိပါ
Andres R ကို ဟုသူကပြောသည်
သိုးထီးကိုထွန်းထားပါကကျွန်ုပ်၏ CPU ၏ ၇၉% ကိုစားပါသည်
Andrés R ကိုစာပြန်ပါ
စာသင်ခန်းနှင့်စာရေးခြင်း (အပိုင်း ၂)
Firefox Mobile OS - ၂၀၁၃ တွင် Android အတွက်အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုပေါ်လာလိမ့်မည်